Ungawathola kanjani ama-movie wethu owathandayo kuNetFlix | Izindaba zamagajethi
Ungawathola kanjani ama-movie wethu owathandayo ku-NetFlix
Insiza yeNetFlix iyatholakala ezindaweni eziningi ezibandakanya kakhulu ikhompyutha kanye nemishini ye-elekthronikhi; ngokwesibonelo, leli thuluzi kungenzeka lisetshenziswa kahle kukhompyutha ye-Windows noma kumadivayisi eselula, Konke kuya ngokuthi silitholile yini ithuluzi elifanele futhi nokubhalisile kumasevisi alo.
Lapho usuthole uhlelo nensizakalo yeNetFlix, umsebenzi onzima wokufuna lawo ma-movie esifuna ukuwajabulela ngesikhathi esithile uzofika. Ngenxa yobuningi babo, singahle size sithi kunzima kakhulu ukuthola lezo ezingasithakazelisa. Kungalesi sizathu-ke manje sizoncoma usizo oluncane ukuze sikwazi thola kuphela lawo ma-series noma ama-movie lokho kungaba ukuthanda kwethu.
Kusetshenziswa insiza yewebhu ukusesha ama-movie kuNetFlix
Ngawo nje lo mzuzu, kungaphakanyiswa umbuzo omncane kumfundi futhi ikakhulukazi, kulabo abasebenzisa insiza yeNetFlix; Wawasesha kanjani ama-movie wakho owathandayo ngohlobo noma ngonyaka wokukhiqiza? Kuzoba nenani elikhulu lezimpendulo kulo mbuzo olula, okuthile okungasuka ezindleleni zendabuko (kwabanye, ezakudala) kuye kulezo eziyinkimbinkimbi kakhulu lapho izinhlelo ezithile ezikhethekile ngokuvamile zibandakanyeka khona. Enye yazo yileyo esizoyincoma njengamanje, eyethulwa njenge- uhlelo lokusebenza lewebhu elihamba ngegama "Ulayini Ongcono" nokuthi ine-interface elula kakhulu ukuyisebenzisa.
Isithombe esisibeke engxenyeni engenhla yiso ozosithola uma usufinyelele isixhumanisi Ulayini Ongcono; lapho unethuba lokulawula izinto ezi-3 ikakhulukazi, okuyi:
I-Tachometer. Lapha ungachaza ababukeli abancane noma iphesenti lodumo ama-movie ozama ukuwathola angaba nawo.
Inombolo yezibuyekezo. I-movie ngayinye ingaba nokubuyekezwa kwalabo abake bayibona, into ozoyichaza kule ngxenye yohlelo lokusebenza lwewebhu.
Unyaka wokukhiqiza. Ngale pharamitha, esikhundleni salokho, uzocacisa unyaka okhiqizwe ngawo la mafilimu noma uchungechunge lwethelevishini.
Ngaphandle kokungabaza, lokhu kuwusizo olukhulu kunoma ngubani ofuna thola izinhlobo ezithile zama-movie wakho owathandayo noma uchungechunge lwethelevishini oludume kakhulu olunikezwe ngesikhathi esithile emlandweni wabo futhi olusingethwe kusevisi yeNetflix.
Manje, uma usuvele uwutholile umqondo ojwayelekile wokuthi into ngayinye iyenzani (ukushintshwa kwesilayidi okuncane) Kulesi sicelo sewebhu, kufanele futhi sisho ukuthi ngeshwa akusebenzi ngesikhathi sangempela. Lapho usushibilisele lokhu kushintshwa okuncane endaweni efanele ngokuya ngosesho onalo ngaphakathi kweNetFlix, kuzofanele usebenzise inkinobho engezansi kwalesi sikrini, Inegama "Hlunga", ngaleso sikhathi imiphumela yama-movie izovela iye ohlangothini lwesokunene salezi zinketho.
Ngaphansi kokushintshwa kwesilayidi esincane uthola inombolo enkulu yezigaba, ezenziwa zisebenze ngamabhokisi azo; ngoba kusobala ukuthi awuzukufuna ukusesha okujwayelekile, ngakho-ke impela uzofuna ukwenza ukusesha okuhlanzekile, okungukuthi, uma lawa mabhokisi enziwe asebenza.
Ngezansi kweswishi yokugcina kunesixhumanisi esincane (cishe esingabonakali) esithi «Kucacile»(Kugqanyiswe ngokubomvu), okuzofanele uchofoze ukuze wonke amabhokisi enziwe angasebenzi. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke kuzofanele ukwenze lokho hlola lawo mabhokisi ezigaba ofuna ukuba yingxenye yosesho lwakho Ngokwezifiso, kufanele ukhethe inkinobho ephansi kancane njengoba siphakamisile ngaphambili (Hlunga).
Uma bevele imiphumela yosesho lwakho lwangokwezifiso kuNetFlix, Ungangeza ngayinye yalawa mafilimu ohlwini lwakho lwezintandokazi, usebenzisa inketho encane ebomvu (isixhumanisi) esiseduze nekhava lefilimu ngayinye ekhonjiswe kule miphumela. Njengoba ukwazi ukubabaza, lolu hlelo lokusebenza lwewebhu luyithuluzi elibalulekile okufanele silisebenzise ukuze ukusesha kwethu ama-movie noma uchungechunge lwethelevishini olusingethwe kule nsizakalo kubonise imiphumela esiyithandayo kuphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungawathola kanjani ama-movie wethu owathandayo ku-NetFlix
Ngiyabonga kakhulu ngomnikelo uGustavo ... noma yisiphi isiphakamiso esiqedela imininingwane yethu sisebenza. Siyabonga ngomusa nangokuvakasha kwethu.